KIANJA BAREA MAHAMASINA : Hovitaina mialohan’ny 26 jona 2022 ny fametrahana ny "piste d’athlétisme en tartan"
vendredi, 29 avril 2022 11:50
Ho faranana amin’ny alalan’ny fametrahana ny "piste d’athlétisme en tartan" ireo asa manodidina ny kianja filalaovana ao anatin’ny tetikasa fanavaozana sy fampanarahana fenitra ny kianja BAREA Mahamasina.
Asa efa nifanarahana tamin’ny orinasa mpanatanteraka izany, saingy tsy maintsy niandrasana ny fahataperan’ny fotoanan’ny orana sy ny fotoana nilaina ho fanamboarana sy fanafarana ny fitaovana. Tonga niaraka tamin’izay ihany koa ireo teknisiana manokana hametraka izany.
Nankatoavina nandritry ny filan-kevitry ny Minisitra ny 27 aprily teo ny fandraisan’ny Fanjakana Malagasy an-tànana ny haban-tseranana mifanaraka amin’ireo entana ireo, toy izay efa nampiharina rehetra teo aloha mahakasika izany tetikasa izany.
Nafarana niaraka tamin’izany ihany koa ireo fitaovana tahiry ho fanoloana izay kojakoja mety ho simba amin’ny ho avy ao anatin’ny kianja.
Hatreto dia ny Sekreteram-panjakana misahana ny Tanàna Vaovao sy Toeram-ponenana, izay efa nandrindra ny tetikasa hatramin'ny voalohany no mbola manohy izany.
Azo ampiasaina tsara ny kianja, ary efa mivonona handray ny lalao fifanitsanana ho an’ny CAN 2023 taranja baolina kitra ny fiandohan’ny volana jona izao.